‘रअ’ एजेन्टको गोप्य सूचना संकलनमा यसरी खुल्यो रहस्य, ८० हजार तलबको लोभमा ३ सय युवा ठगिए ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
‘रअ’ एजेन्टको गोप्य सूचना संकलनमा यसरी खुल्यो रहस्य, ८० हजार तलबको लोभमा ३ सय युवा ठगिए !
प्रकाशित मिति १ माघ २०७४, सोमबार १९:०० लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं । एक युवक हरेक दिन बिहानै कालिमाटी पुग्थे। उक्त क्षेत्रमा दिनभर केके भयो सबै घटनाको विवरण उतारेर फाइल बनाउँथे।
कालिमाटी क्षेत्रमा कति बजेसम्म घाम लाग्यो र कति समय जाम भयो भन्नेसम्मको विवरण उतारेर उनले दैनिक फाइल बनाउनुपर्थ्यो। त्यो पनि गरे। किनकि उनलाई खटाइएको थियो, भारतीय गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’को एजेन्टका रुपमा। जिम्मेवारी थियो, कालिमाटी क्षेत्रको सूचना संकलन।
उनले सो क्षेत्रमा तयार पारेको फाइल ‘रअ’का हाकिमलाई बुझाइने बताइएको थियो।
मासिक ५० हजार भारु तलब (८० हजार नेपाली रुपैयाँ) आउनेगरी ‘एजेन्ट’मा नियुक्त गरिएपछि उनले दिनभर खटेरै काम गरे। तर उनले सुरुमा जागिरबारे कसैलाई भनेनन्। किनकि एजेन्ट जस्तो जागिर भएकाले धेरैसँग गोप्य नै राखेका थिए।
जागिर लगाइदिने सप्तरीका रमानन्द नौनियासँग सुरुमा त उनको फोनमा कुरा हुन्थ्यो। जागिर खाएको एक महिनापछि उनको फोन नै अफ हुन थाल्यो। तलब माग्न खोज्दा नौनिया सम्पर्कविहीन भए।
अन्य साथीहरुसँग समेत बुझ्दा आफूलाई रअको काठमाडौं प्रमुख बताउने नौनिया बेपत्ता भएका रहेछन्। नौनियालाई चिनाइदिने विनोद कार्कीसँग पनि ती युवाले जानकारी गराए। कार्कीले पनि आफूसँग सम्पर्क नभएको बताएपछि उनी निराश भए।
नौनियाले भारतीय दूतावासको नाममा नियुक्तिपत्र नै दिएका थिए। पछि थाहा भयो, नियुक्तिपत्र त नक्कली पो रहेछ!
आफूहरु ठगको फन्दामा परेको चाल पाएपछि प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्न बाध्य भए उनीहरु। रअ एजेन्टका नाममा आफू जस्तै अरु पनि ठगिएको उजुरी प्रहरी कार्यालयमा पुगेको थाहा पाउँदा उनी छाँगाबाट खसेझैं भए।
सुरुमा महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनीले रअको एजेन्ट हुन खोज्दा ठगिनेहरु नै गलत भएको भन्दै अनुसन्धानमा चासो दिएनन्। पछि, उजुरीहरु बढेपछि महाशाखाले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। ठगीका मुख्य योजनाकार नौनियासहित ६ जना पक्राउ परिसकेका छन्।
एनजिओबाट ठगी सुरु
वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पुगेर फर्किएका व्यक्ति हुन्, नौनिया। सप्तरीको राजविराज घर भई बाफल बस्ने उनले आफ्नो नाम रमाकान्त चौहान भन्दै ढाँट्ने गरेका थिए।
वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएपछि उनले आफूले उच्च तहका व्यक्तिहरु चिनेको र विदेशबाट अनुदान ल्याउन सकिने भन्दै सिबिजी नामक एनजिओ खोले। बेलायतबाट लाखौं डलर ल्याउने आश्वासन देखाई उनले विभिन्न व्यक्तिलाई संस्थामा राखेर लगानी गर्न लगाई ठग्ने प्रयास गरेका थिए।
त्यही बीचमा उनले रअमा भर्ना गरिदिने भन्दै ठगीको अर्को योजना बनाएका हुन्।
रअको नाम नै थाहा थिएन
भारतको खुफिया एजेन्सी रअ (रिचर्स एन्ड एनालाइसिस विङ्) को वास्तविक नाम समेत नौनियालाई थाहा थिएन। लेटरप्याड बनाउँदा आरओडब्लु लेखेका थिए। पछि समूहका व्यक्तिहरुले भनेपछि उनले आरएडब्लु लेखका थिए।
त्यही संस्थामा आबद्ध सन्तोष कार्की, विनोद कार्की, पदमबहादुर श्रेष्ठ, चित्रबहादुर श्रेष्ठ र गीता श्रेष्ठमार्फत उनले रअमा जागिर खाने व्यक्तिहरु खोज्न लगाएका थिए।
नेपाल सरकारसँगै मिलेर काम हुने तर भर्नाको विषय गोप्य राख्नुपर्ने भन्दै करिब ३ सय व्यक्तिलाई उनले नियुक्तिपत्र समेत दिलाए। जसमध्ये कतिपयलाई एरिया तोकेरै विभिन्न क्षेत्रमा सूचना संकलनका लागि खटाए।
भर्ना गरिदिएपछि उनले ४ महिनाको तलब सुरुमै आफूलाई चाहिने भन्दै पैसा मागेका थिए। मासिक ८० हजार नेपाली रुपैयाँ बराबरको तलब हुने भएकाले युवाहरुले पनि सजिलै ५ लाख रुपैयाँसम्म पैसा बुझाए।
हालसम्म थोरै मात्र उजुरी आए पनि ३ सयभन्दा धेरै व्यक्तिलाई नौनियाले ठगी गरेको एसएसपी लोहनी बताउँछन्।
पक्राउ परेका नौनियासहित ६ जनालाई नै प्रहरीले आइतबार ठगी मुद्दामा कारबाही अघि बढाएको छ।
स्वयम्भु गोलीकाण्डमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई कारवाही गर्न नेकपाको सिफारिस
रामेछाप । गत शुक्रबार अपराध महाशाखाका प्रहरीले काठमाडौंस्थित स्वयम्भु, बिजेश्वरीबाट रामेछाप, तिल्पुङका लोप्साङ भनिने बाबुराम तामाङलाई घुँडामुनि गोली हानेर…
काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउन नयाँ विकल्प अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदद्धारा गठित उच्चस्तरीय…
निर्मला हत्या छानबिन समितिका सदस्यलाई हृदयघात
काठमाडौं । निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारको अनुसन्धानको विषयलाई लिएर सरकारले गठन गरेको समितिका एक सदस्यलाई हृदयघात भएको छ ।…
कहिले पुग्छन् २९ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा ?
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययनअनुसार स्थानीय तहमा गरी झण्डै २९ हजार कर्मचारी दरबन्दी खाली…
काठमाडौं । काठमाडौंको महाराजगञ्जबाट १० कात्तिकमा पक्राउ परेका २५ जना जुवाडेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानविन थालेको छ…
वाइफाईको पासवर्ड चोरी भयो ?
काठमाडौं । वाइफाई एउटा ताररहित रेडियो वेब प्रविधि हो । जसका माध्यमबाट इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूले एउटाबाट अर्कोमा वेब आदान–प्रदान गर्छन्…